Kooxaha waaweyn ee Liverpool iyo Manchester United ayaa indhaha ku haya weeraryahanka Barcelona Antoine Griezmann, sida ay qortay Daily Mail.
Griezmann ayaa lagu soo waramayaa in loo balanqaaday inuu hoggaan u noqon doono weerarka kooxda Ronald Koeman hadii Lionel Messi uu ka tago kooxda, laakiin kabtanka Barca ayaa sida la saadaalinayo sii joogi doona Camp Nou ilaa xilli-ciyaareedka 2020-21.
Haddii uu Messi sii joogo Barca, kooxda heysata Premier League ee Liverpool, Man United iyo Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay dalab ka soo gudbin doonaan Griezmann.
– The Guardian ayaa sheegaysa in Manchester City ay diyaarineyso dalab labaad oo ay ka gudbinayso daafaca dhexe ee Napoli Kalidou Koulibaly. Kooxda Pep Guardiola ee City ayaa ku rajo weyn in ay Napoli la gaadhi karaan heshiis maadama Man United sidoo kale la soo sheegayo in ay isha ku hayso xiddigan daafaca ka ciyaara.
– La Gazzetta Sportiva ayaa wax badan ka qoray xaalada labada laacib ee Barcelona Luis Suarez iyo Arturo Vidal. Suarez ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus, halka Vidal uu u dhaqaaqayo kooxda Antonio Conte ee Inter.
Inkastoo Suarez lagu soo waramayo inuu ku dhow yahay inuu Barca uga wareego Juve, haddana kooxda reer Talyaani ayaa ka fiirsaneysa bedel kale haddii heshiiska uu burburo. AS Diario ayaa sheegeysa in Juve ay sidoo kale miisaameyso ciyaaryahanka Atletico Madrid Alvaro Morata, halka weeraryahanka Roma Edin Dzeko iyo weeraryahankii hore ee Paris Saint-Germain Edinson Cavani sidoo kale lala xidhiidhinayo Juve.
– Sida laga soo xigtay Le10 Sport, Rennes ayaa wadahadal kula jirta daafaca Inter Diego Godin. 34 jirkan ayaa ku dhameystay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay Inter Milan.
– AC Milan ayaa weli ka mid ah kooxaha ugu firfircoon suuqa kala iibsiga. Calciomercarto ayaa ku warameysa in Rossoneri ay wadahadal la yeelatay wakiilka Fali Ramadani kuwaasoo ku saabsan daafaca Fiorentina Nikola Milenkovic, halka weeraryahanka Real Madrid Luka Jovic uu weli xiiseynayo inuu yimaado kooxdan.
– Saxafiga reer Norway Fredrik A.N. Filtvedt ayaa sheegay in tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer uu marar badan la hadlay xiddiga Borussia Dortmund Jadon Sancho iyadoo la sheegayo in ciyaaryahankan heerka caalami ee dalka England uu doonayo inuu u soo dhaqaaqo Old Trafford.
Previous PostDaawo: Jaamac Shabeel Oo Kula Taliyay Saylici Inaanu Tagin Shiwaynaha Kulmiye Next PostWasiirka Arrimaha Dibada Ee Somaliland Oo Goor-dhawayd U Dhoofay Taiwan